I-36 Best Red Hat Iikholeji zoQeqesho eziQinisekisiweyo zokuqhelisa izakhono zakho
I-36 I-Best Red Hat Training Courses ukuxubha izakhono zakho
Red Hat Certified Certified Training Partner
I-36 Best Red Hat iQeqesho Training Courses
1. Iphepha elibomvu - i-RHCSA kwi-RHEL 7
2. Iphepha elibomvu - i-RHCE kwi-RHEL 7
3. I-Red hat ye-Enterprise Performance Tunning
4. I-Redhat JBoss yoLawulo lweZicelo I
5. I-Red hat yeJBoss yoLawulo lweZicelo II
6. I-RHCSA i-Rapid Track course (RH199)
7. Uluhlu olubomvu Ulawulo lwe-OpenStack (CL210)
8. Uluhlu olubomvu lweFormForms Hybrid Cloud Management
9. I-Red Hat System Administrator III
10. Uluhlu oluBomvu lwe-Enterprise Clustering kunye noLawulo lweSitoreji
11. Uluhlu oluBomvu lokuThunywa kweeNkampani kunye noLawulo lweeNkqubo (RH401)
12. Iphepha elibomvu I-Satellite 6 Administration (RH403)
13. Isikhitibomvu esiBomvu iNkampani yokuLungisa
14. Ubunqobe obomvu weCeph Architecture kunye noLawulo
15. Iphepha elibomvu Ulawulo lwe-OpenStack I
16. Iphepha elibomvu Ulawulo lwe-OpenStack II
17. I-Red Hat CloudForms yoLawulo lweNdawo yamaHlathi
18. I-Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Operations
19. Umyalezo we-Apache Qpid nge-Red hat ye-Enterprise Linux I-OpenStack Platform
20. I-RabbitMQ Imiyalezo nge-Red Hat i-OpenStack Platform
21. Ukufumaneka okuphezulu kunye ne-Red hat ye-OpenStack Platform
22. I-Red Hat JBoss Enterprise Application Development I
23. Ukubeka iliso nge-Red Hat JBoss Network Network
24. Uphuhliso lwe-SwitchYard ne-Red Hat ye-JBoss Works Service Works
25. Ukuphuhliswa kweekamela kunye ne-Red Hat JBoss Fuse
26. Ukudala Izicelo zoLwazi lweeNkcukacha nge-Red hat JBoss BPM Suite
27. Ukuthunyelwa kweBhasi yeeNkonzo zeeNkampani nge-Red Hat JBoss Fuse
28. I-hat ebomvu i-JBoss A-MQ uPhuhliso kunye nokuSebenza
29. Iphepha elibomvu iJBoss Fuse Rapid Track
30. I-RedHat Data Data Virtualization Development
31. I-RedHat ye-JBoss Data Development Grid
32. Ukugunyaza iMigaqo nge-Redhat JBoss BRMS
33. Ukuphunyezwa nge-Redhat JBoss BRMS
34. Ukwakha Izicelo ze-Enterprise ze-Red Red Advanced
35. Ulawulo lwe-Gluster Storage Storage
36. I-Red Hat i-OpenStack Administration III (CL310)
Iqela le-Red Hat eliQinisekisiweyo yoQabane loQeqesho (RHCTP) liqela labantu lisiza i-Red Hat kunye neendleko zabathengi kunye nabathengi benza amalungiselelo okudala, ama-savvy abonisa ukubaluleka kwenene. I-RHCTP ihlala ihlala ikwazi ukugcina i-Red Hat ikulungiselele kwaye iqinisekise abantu abanobuchule obuchanekileyo beengcali ze-wannabe. Kukho indawo enkulu yokukwazi ukufaka okanye ukusekwa iziqinisekiso zabo kwi-Open Source emitsha indawo eyenziwa yi-Red Hat. Iqela labahlali be-RHCTP lithatha i modyuli zezemfundo ze-Red Hat zigxininisa kwiimpawu ngelixa zibeka iimpendulo zokulungiselela abaxhasi abaphela. Iqela leqela le-RHCTP lisebenza kunye neR Red Hat ukuze lidlulise iindleko ezibalulekileyo, ezide, iimpendulo ezilungelelaniswayo neemfuno zabaxhasi be-IT.
Innovative Technology Solutions iQinisekisa iCommunity Training Training Partner. Innovative Technology Solutions (i-Red Hat Training Partner) inikeza iiRot Hat eziQinisekisiweyo zoQeqesho kwi-Intanethi / zikhutshwe kwiindawo ezizodwa ze-9 eNdiya: i-Bangalore, i-Chennai, i-Delhi, i-Gurgaon, i-Hyderabad, i-Kolkata, i-Mumbai, i-Noida ne-Pune.
Ingaba uqala ukwenza ubungqina bakho okanye ukwakhiwa kwamakhono amasha, le ndawo yinto yonke eqalayo. Iimpawu eziphambili ze-Ace ze-Red Hat Enterprise Linux®, i-Red Hat JBoss® Middleware, i-Red Hat i-OpenStack® Platform, kwaye yiyo kuphela intonga ye-iceberg.
Phonononga i-rundown epheleleyo yee-Red Hat eziQinisekisiweyo zoqeqesho kunye nokufumanisa izifundo ezikusebenzelayo.
I-Red Hat inika amandla yonke into yokuba i-RHCSA icinge ngokuthatha ubuncinane enye yeeklasi zokufundisa ezisemthethweni ukuze zilungele. Ukuthatha inxaxheba kwezi klasi akudingeki, kwaye omnye unokuthatha kuphela ukuhlolwa. Abanomncintiswano abanobuchule abaye beza eklasini njengokuba banamathuba amaninzi kunye neengxelo zengcaciso yokuba iklasi ineziphumo ezakhayo kubo.
Ukufumana ubungqina be-RHCE, kufuneka umntu aphumelele i-Red Hat Certified Certified System (RHCSA). Omnye umntu unokungena ngaphakathi aze athathe uvavanyo lwe-RHCE ngaphandle kokugqitywa kokuqala kokuhlolwa kwe-RHCSA, nangona kunjalo ukuqinisekiswa kwe-RHCE akuyi kukhutshwa kwaze kwaba yilezo zibini zifunyenwe ngumncintiswano. Ukuba ithemba lingazange lifumane iRHCSA, i-Red Hat iya kubamba irekhodi lokuhlolwa kweRHCE lomncintiswano kwaye iya kufakela irekhodi kubhaliso lwabafakizicelo beRHCSA xa lifunyenwe emva komhla.
I-Red Hat isekela yonke into yokuba i-RHCE iqwalasele ukuthatha ubuncinane enye yeeklasi zokufundisa ezisemthethweni ukucwangcisa. Ukuthatha inxaxheba kwezi klasi akudingeki, kwaye omnye unokuthatha kuphela ukuhlolwa. Abafakizicelo abaninzi abaphumelelayo beza eklasini njengokuba sele benesiphelo sokunika ulwazi kunye neengxelo zokufunda ukuba iklasi inomphumo onenzuzo kubo.
I-Red Hat ixhobisa bonke abachaphazelekayo kwi-Red Hat Enterprise Performance Tuning Examination Expertise (EX442) ukuba baqwalasele ukuthatha isatifikethi se-Red Hat soBuchule kwiCandelo lokuFundisa ukusebenza (RH442). Ukuthatha inxaxheba kule klasi akudingeki, ngoko umntu unokuthatha kuphela uvavanyo. Abaninzi abakhuphisanayo abanokuvelisa abaye beza eklasini njengokuba sele benesakhono esanele kunye nolwazi baye baxela ukuba iklasi yaba nesiphumo esakhayo kubo.
Amava kukulungeleka kakhulu ukuhlolwa. Yiba nokuba kunjalo, nabantu abanamava apha nalapho banemibhobho ekuqondeni kwabo, ngoko i-Red Hat inika amandla onke amathuba okuba i-RHCJA iqwalasele ukuthatha i-JB248 JBoss kubalawuli Ikhosi. Le khosi ibonisa iphuzu kwaye ingaba negalelo elinokubakho ukubandakanyeka kunye nesibonelelo esibalulekileyo sokulungelelanisa iimviwo.
I-Red Hat ichaza ukuba ithemba liza kuphumelela i-Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) okanye i-Red Hat Certified Engineer (RHCE) ngaphambi kokuzama ukuvavanya le mvavanyo, kodwa akukho mfuneko. Ukuqonda kweengcamango zesiseko kwiJava Enterprise Edition kuyincedo, nangona kunjalo abaqhubi akufanele babe yiinjineli kwaye lo mvavanyo awubandakanyi iinkqubo zokuphucula izicelo.
Ukukunceda ukusetha, iindawo zokuhlola ziqakraza iziganeko ezinokuthi ungathemba ukuba uzivelele kulo mvavanyo. Ezi ndawo zisebenza kwiJBoss EAP 7.
Idibanisa i-Red Hat System Administration I kunye ne-II kwinqanaba elikhawulezayo I-RHCSA i-Rapid Track course (RH199) ibonakalisa i-Red Hat® Enterprise Linux®7 kwaye ijoliswe kubafundi abaye banokubandakanyeka okukhulu kunye nenhlangano ye-Linux. Le khosi iphanda iincwadi ezifakwe kwi-Red Hat System Administration I (RH124) kunye ne-II (RH134) ngokukhawuleza.
Kwizinto ezibonakalayo eziphathekayo, izinto ezifunekayo kufuneka zilungele ukuthatha i-Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).
Qaphela ukuba: Le khosi iya kwandisa ukuqonda okukhoyo kwangoku kwintlupheko ye-Linux yokwakheka kwenkqubo yentlawulo. Iziganeko kufuneka zibe nekhono lokwenza iifomeshoni eziqhelekileyo zisebenzisa iigobolondo, zisebenze kunye nokukhethwa kwezikhetho ezisisiseko, uze ufike kumaphepha omntu ukuze unike inkxaso. Iziganeko ezingenalo lwazi ziyanxuswa ukuba zithathe i-Red Hat System Administration I (RH124) kunye ne-II (RH134).
Ukwazisa, ulungiselele, kwaye ugcine i-computing ekhoyo esetyenzisiweyo usebenzisa i-Red Hat OpenStack Platform. Le khosi ibonisa iintloko zesikhokelo ukuba zenze njani i-computing evakelwe indawo esebenzisa i-Red Hat® OpenStack® Platform, kuquka ukusekwa, ukusetha, kunye nenkxaso.
Le khosi inokunceda ngokunjalo ukuba ulungele umlawuli we-Red Hat oyi-System Certified Exam (EX210).
Le khosi incike kwi-Red Hat OpenStack Platform 8.
I-Red Hat I-OpenStack Administration II (CL210) iya kuqala ukuhamba ukusuka ekulawuleni i-OpenStack esebenzisa i-Horizon ukuya kusetyenziswa ukuhlanganiswa komgca wendlela yokuhamba. Izakhono zovavanyo ezifunyenwe kwikhosi zibandakanya: lungisa i-Red Hat OpenStack Platform esebenzisa i-OpenStack Director, ilungiselele abaxhasi, i-ventures, flavour, izingxenye, imifanekiso, iinkqubo zolawulo, kunye nokugcinwa kwesikwere, ukusetyenziswa kweekhompyutha (ukukhawuleza nokunciphisa), nokwenza umfanekiso oguqulwayo.
Bonisa indlela yokudlala ilungiselelo eliphantsi kunye nokusekwa kweeRow Hat CloudForms. I-Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management ibonisa indlela yokudlala umgaqo ophantsi kunye nokusekwa kweeRow Hat CloudForms.
ISatifikethi se-Red Hat® soBuchule kwi-Hybrid Management Management sisibhengezo sokwenza isicelo esekelwe kwisibhengezo. Abantu abafumana iSatifikethi seSatifikethi se-Red Hat kwi-Hybrid Cloud Management babonise iimpawu zokufunda nokufunda ukuthumela nokujongana nesiseko sokubaluleka esebenzisa i-Red Hat CloudForms.
Abanini beSatifikethi seNkcenkceshela kwi-Hybrid Management Management bangadlala iifayile ezilandelayo:
Dlulisa iiHomeForms zeHlabathi zeHlabathi
Yenza i-Red Hat CloudForms ukudibanisa kunye nabaniki-nkonzo abathile
Sebenzisa ii-Red Hat CloudForms ukwenza ulawulo lwee-frameworks
Ukwandisa amandla akho ukulawula izikhokelo ze-Linux kwaye ulungele uvavanyo lwe-Red Hat Certified Certified (RHCE).
I-Red Hat® yoLawulo lwe-III III (i-RH254), echongiwe nge-Red Hat Enterprise Linux, ® 7, ijoliswe kubalawuli bekhokelo be-Linux abanamava abamba i-Red Hat Certified Certified System Administrator (RHCSA®) okanye ubungqina obulinganayo kwaye bafuna ukwandisa amandla abo ukulawula iinqununu zeLinux kwizinga lomzamo.
Le khosi igxile ekuthumeni nasekujongeni iinkonzo zenkqubo ezisebenza ngokugcina i-Domain Name Service (DNS), uMariaDB, i-Apache HTTPD, i-Postfix yeStccents, i-Postcard, i-Postfix SMTP, i-NFS kunye ne-Message Message Block (SMB), abaqalisi be-iSCSI kunye neethagethi. , ukuqhubela phambili ukucwangcisa kunye nokuhlelwa kwamanzi, kunye nokusetyenziswa kwe-shell ye-shell ye-shell ye-robotize, ukuyila nokuphanda isakhelo. Ngokusebenzisa iilesi kunye nezandla kwiilabhu, abaxhasiweyo abaye bafumana ngokusemthethweni ukuqinisekiswa kwe-RHCSA kuya kuboniswa kuzo zonke izakhono ezigqitywe yi-Red Hat Certified Certified (RHCE) (EX300).
Inkcazo kwaye ubonise ukufikelela okuphezulu. Inkqubo yokugcina i-Red Hat® High Availability Clustering (RH436) ibonisa ukulawulwa kokugcinwa kwempahla, i-Red Hat High Availability Add-On, kunye nokwabelana ngokugcinwa kwezinto ezintsha ezinikezwa yi-Red Hat Global File System 2 (GFS2) kunye ne-Red Hat Gluster Storage .
Yenzelwe kubaphathi abaphezulu be-Linux®, le khosi ye-4 yosuku libonisa ngokugqithiseleyo ukunyanzeliswa kwe-lab. Uya kuqonda ukuba ungathumela uphinde uhlolisise njani amandla okuhlanganyela kunye namaseva aseva anikezela ngokubanzi iinkqubo zolawulo kwi-mission-eyisisekelo yendawo yokuzama.
Le khosi inokunceda uceba isitifiketi se-Red Hat soBugcisa kwi-High Availability Clustering test (EX436).
Bonisa indlela yokuzisa iseva ye-Red Hat Satellite kwaye uyisebenzise ukuthumela nokujongana nezikhokelo. UkuLawulwa kwe-Red Hat ® Enterprise kunye noLawulo lweeNkqubo uphando malunga neengcamango nezakhono ezibalulekileyo ukwenzela ukuba i-scale scale exlive entlanganisweni kunye nokulawulwa kwezikhokelo ze-Red Hat Enterprise Linux®.
Le khosi i-Red Hat Satellite 5.
Iziganeko ziya kufumana indlela yokuzisa kunye nokusebenzisa iseva ye-Red Hat Satellite kunye namalungelo aphuculweyo ukuphendula ukuthumela nokujongana nezikhokelo. Ngaphambi kokuphela kwesi sifundo, abaphathi baya kwenza iimpahla zabo ze-RPM kwaye baya kusebenzisa ukuchithwa kweengcaphephe ekujongeni utshintsho kwiirekhodi. Le khosi inokunceda ngokunjalo uceba isitifiketi se-Red Hat soLwazi kwiSebe lokuPhathwa kunye noLawulo lweeNkqubo (EX401).
Bonisa indlela yokuzisa i-Red Hat Satellite 6
I-Red Hat Satellite I-6 Ulawulo (i-RH403) yinkqubo yebhabhi esekelwe ebhenkheni iingcamango kunye neendlela ezibalulekileyo ekulawulweni kwezinga eliphezulu lokulawula izikhokelo ze-Red Hat® Enterprise Linux®. Amalungu enkcazo aya kufumana indlela yokuzisa i-Red Hat Satellite 6 kumncedisi kwaye uyayifakela ngeenkqubo zenkqubo.
Le khosi incike kwi-Red Hat Enterprise Linux 7 kunye ne-Red Hat Satellite 6.
Iziganeko ziya kusebenzisa i-Red Hat Satellite ukujongana nomjikelezo wobomi bokuphucula umgangatho womncedisi obhalisiweyo kunye nokuqulunqwa kwayo, kwaye uqaphele indlela ilungiselelo lidibanise ngayo inkqubo kunye nolawulo lwe-Puppet ukusekwa ekuthumeni.
Fumana oko kuthatha okufunekayo ukuthumela nokujongana neemeko ezintle. I-Red Hat Virtualalization (RH318) iyalela i-framework-chair chairmen eneendlela ezifanelekileyo zokusebenzisa i-Red Hat® Enterprise Linux® ejongene ne-Red Hat Virtualization suite.
Iziganeko zifumana iziphumo kunye nolwazi olwenziwe ngokufanelekileyo, thumela, lujongise, luqhube kwaye luqhube ii-Linux ezichanekileyo zoomatshini eziqhutyelwe kwi-Red Hat Virtualalization Hypervisor hubs okanye kwi-Red Hat Enterprise Linux iseva ezisebenzisa i-Red Hat Virtualalization Manager.
Le khosi inceda ngokunjalo abakhuphisanayo ukuba balungiselele ukuhlolwa kwe-Red Hat Virtualization Exam (EX318), leyo, xa ithe yadlula, ithola i-Red Hat Certified Certialization Administrator (RHCVA).
Bonisa indlela yokulawula i-Red Hat Ceph Storage kwaye udibanise ne-Red Hat OpenStack Platform. I-Red Hat® Ceph Architecture kunye noLawulo (i-CEPH125) yincwadana yeCandelo loPhuhliso lweTeknoloji yezifundo ezivela kwi-Red Hat Training. Le khosi yeentsuku ezinhlanu ijoliswe kubaphathi bamandla okanye abalawuli befu abafuna ukuthumela i-Red Hat Ceph Storage kwisizukulwana sabo kunye neendawo zabo ze-OpenStack®.
I-Red Hat Ceph I-Architecture ne-Administration (i-CEPH125) ihlelwe ngeengxande ze-3. Isiqununu esinqununu singaphakathi nangaphandle kwe-Red Hat Ceph Storage yobunjineli kwaye inikeza izikhokelo zokuhambisa i-Red Hat Ceph Storage, kuquka neClush Storage Cluster, iCeph Object Gateway, kunye neCeph Block Device. Isiqendu sesibini sigxile kwimisebenzi yansuku zonke yeCeph Storage group kunye namanye amacandelo okupanda kunye nokucwangcisa ababonisi abanamandla abanokuyisebenzisa ukunika i-24 × 7 ukufikeleleka kwesakhelo sesikhundla. Icandelo lesithathu libandakanya ulungelelwaniso lweCeph Storage Cluster kunye no-Glance kunye neCinder kwi-Red Hat OpenStack Platform. Eli qhekeza libandakanya ukwakhiwa kwe-Red Hat Ceph Storage njengenguqu ye-Swift kunye nokuyilungisa ngeCandelo loKhiye.
Bonisa indlela yokuzisa, ukuyila, ukusebenzisa, nokugcina i-Red Hat OpenStack Platform. I-Red Hat I-OpenStack Administration I (CL110) yenzelwe iinqununu zesikhokelo ezicetyisayo ukuba zenze iimeko zokusingatha iikhompyutha ezisebenzisiweyo zisebenzisa i-Red Hat OpenStack® Platform.
Le khosi iya kufundisa iingxaki zokuzisa ubungqina-bombono, ukulungiselela, ukusebenzisa, nokugcina i-Red Hat OpenStack Platform. Le khosi ibandakanya ulawulo lweziko: ubuntu (i-keystone), ukugcinwa kwesikwere (Cinder), umfanekiso (Ukubaluleka), ukucwangcisa (i-Neutron), umfanekiso kunye nomlawuli (Nova), kunye nedeshibhodi (i-Horizon).
Ukwazisa, ulungiselele, kwaye ugcine i-computing ekhoyo esetyenzisiweyo usebenzisa i-Red Hat OpenStack Platform. Le khosi ibonisa ababonisi-sikhokelo ukuba bafeze njani i-computing evakelwe indawo esebenzisa i-Red Hat® OpenStack® Platform, kuquka ukusekwa, ukusetha, nokugcina.
I-Red Hat I-OpenStack Administration II (CL210) iya kuqala ukuhamba ukusuka ekulawuleni i-OpenStack esebenzisa i-Horizon ekusebenziseni ukuhlanganiswa kokuhlanganiswa komgca wendlela. Izakhono zovavanyo ezifakwe kwikhosi zibandakanya: Ukuyila i-Red Hat OpenStack Platform esebenzisa i-OpenStack Director, ilungiselele abaxhasi, i-ventures, flavors, izingxenye, imifanekiso, iinkqubo zolawulo, kunye nokugcinwa kwesikwere, ukusetyenziswa kweekhompyutha (ukukhawuleza nokunciphisa), nokwakha umfanekiso oqingqiweyo.
Bonisa indlela yokudlala i-design engundoqo kunye nokuseta i-Red Hat CloudForms. I-Red Hat CloudForms yoLawulo lweNdawo yamaHlathi (CL216) ibonisa indlela yokuyila nokusebenzisa i-Red Hat CloudForms.
Iziganeko ziza kubonisa indlela yokudlala i-CloudForms ejongene nayo, zibandakanya i-Red Hat Enterprise Virtualalization, yenza ukuhlola nokulungelelaniswa kwamashishini, ukulungiselela amashishini angqalileyo (VMs), kwaye unikezele iingxelo ezahlukeneyo.
Ukubonisa indlela yokusebenzisa i-Red Hat CloudForms izixhobo zokuqonda. I-Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Operations (CL218) ibonisa indlela yokusebenzisa amacebo okuqonda e-Red Hat CloudForms. Iziganeko ziya kufumana indlela yokusebenzisa izinto eziphambili zeendlela zokusebenza, ukusekwa kwamandla okulinganisa, ukulungelelanisa i-inventory kunye neenzuzo, kunye ne-alamu zoyilo.
Yenza i-Apache Qpid njenge-benefital benefit okanye njengenxalenye ye-Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. I-Apache Qpid Imiyalezo ene-Red Hat® Enterprise Linux® i-OpenStack®Platform (CL314) kukuba ngabaphathi bekhompyutheni, ababonisi bamnyama, kunye nabalawuli befu abaceba ukwenza i-Apache Qpid njengenzuzo yokuzimela okanye njengenxalenye ye-Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.
Ukuhlaziywa kweRbitbitMQ njengenzuzo yokuzimela okanye njengecandelo le-Red Hat OpenStack Platform.
Le khosi ijoliswe kwi-chairmen yekhokelo, abalawuli belifu kunye nabalawuli befu abafuna ukuqhuba iRbbitMQ njenge-benefital benefit okanye njengenxalenye ye-Red Hat OpenStack Platform.
I-RabbitMQ Imiyalezo nge-Red Hat OpenStack Platform yincwadana yokunyuka kwamalungiselelo amatsha eekomiti ezivela kwi-Red Hat Training. Iikhosi eziphakamileyo ezintsha ziqakathekile kwaye zisebenziseke kwaye zijoliswe njengeelabhu ezikhokelwayo.
Thatha okungakumbi malunga nezinto eziphezulu zokufikeleleka kunye nezixhobo ze-Red Hat OpenStack Platform.
Ukufumaneka ngokuphezulu kwe-Red Hat® i-OpenStack® Platform (CL332) kukuba ngabaphathi bezikhokelo kunye nabalawuli befu bafuna ukufikeleleka kwe-Red Hat OpenStack Platform. Le khosi inikela ngokugqithiseleyo kwiinkalo eziphezulu zokufikeleleka kunye nezixhobo ngaphezu kolawulo lwethu lwe-Red Hat OpenStack Administration (CL210).
Le khosi isebenzisa i-bunching ephezulu yomthombo ovulelekileyo kunye namalungiselelo afikeleleko okufikeleleka kwaye iya kunika icebo elide lokuzibandakanya ne-Red Hat OpenStack Platform. Iziganeko ziya kuqhuba nganye yezolawulo ngendlela efikeleleke kakhulu kwaye zivavanye iimeko ze-failover. Iziganeko ziya kusebenzisa i-Pacemaker, i-Corosync, i-CMAN, kunye ne-HAProxy ukuqhuba iqela kunye nezinye izixhobo ezifikelelekayo.
Yenza, uvavanye, kwaye ugcine i-Java EE-izicelo ezivunywayo ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni
Ukuphakanyiswa kwabaqulunqi beJava ™ bephakathi, iJBoss® Enterprise Application Development (JB225) ikwazisa ngeJava EE 6 izakhiwo, iinkcukacha, kunye neenkcukacha zohlelo lokusebenza (APIs).
Yenza, uvavanyo, ugcine i-Java EE--consistent applications
Ukubonisa indlela yokwenza, ukuvavanya, nokugcina i-Java EE-izicelo ezivunywayo ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni usebenzisa i-Red Hat® JBoss Developer Studio esekelwe kwi-Eclipse.
Yenza isicelo esiluncedo ngokupheleleyo kwiJava
Iifowuni ezifikelela kude kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwimeko, ii-labor labakers ziyakwazi ukuqhubela phambili kwintsebenziswano ye-Red usetyenziso lwe-Red Hat JBoss Enterprise Platform 6, i-Contexts and Dependency I, i-Arquillian, i-JBoss Hibernate, i-RESTEasy, i-HornetQ kunye nezinye iinkqubela ezihambelanayo ukuze zenze ngokupheleleyo isicelo esisebenza ngeJava.
Yenza isetyenziso esipheleleyo sesicelo esiphezulu
Ukubonisa indlela yokwenza i-application ye-JavaServer Face (JSF) ye-2 ekupheleni kwe-intanethi, i-API ye-Java ye-Restless Web Services (JAX-RS), uluhlu lwe-Enterprise JavaBeans (EJB), kunye ne-Java Persistence API. (JPA) uluhlu lobuchule, usebenzisa ubuchule bokucwangcisa ukulungelelanisa, ukucwangcisa kunye neenkqubo zokuvavanya.
Isiqendu esisodwa sokulawula Ukusebenzisa, ukuLawula, nokujonga i-Red Hat yakho Jboss Imveliso ye-Enterprise Middleware, Izicelo, neeNkonzo.
I-Red Hat JBoss Network Network, inxalenye ebalulekileyo ye-Red Hat JBoss ejongene neminikelo yokubonelela, inika ukusebenza ekuphatheni nasekuhloleni amakhono okulawula ngempumelelo uninzi lweemeko zakho zohlobo lwe-Red Hat JBoss, ekuncediseni ukwandisa umkhiqizo wokusebenza, ukunciphisa iindleko kunye nokuqinisekisa inzima kubaxhasi bakho bokugqibela.
I-Red Hat JBoss Network Network, iqela eliphambili le-Red Hat JBoss elijongene neminikelo, inika ukusebenza ekulawuleni nasekuhloleni amandla okulawula ngokufanelekileyo inxalenye enkulu yeimeko zakho zokufaka izicelo ze-Red Hat JBoss, ekuncediseni ukwandisa umkhiqizo osebenzayo, ukunciphisa iindleko, nokuqinisekisa neengxaki ezilungileyo kubaxhasi bakho bokugqibela.
Uphuhliso lweShintshi ye-Red Hat JBoss yeeNkonzo zeeNkonzo zeeFuse zihambisa ukuhlaziywa kwemisebenzi ye-JBoss yeSevisi yeeFuse kunye nendlela i-SwitchYard ehambelana ngayo phakathi kwamacandelo ayo, elandelwa ngamacandelo ambalwa amacandelo anikezelwe yi-SwitchYard, equka i-JavaBean, iKamela, iMithetho, kunye ne-Business. Indlela yoMzekelo kunye neNkcazo (BPMN). Oku kulandelwa ukubonakaliswa nokusetyenziswa kweengcango ezininzi kunye nezibophelelo ezivumela oonjiniyela ukuba basebenzisane phakathi kwe-SwitchYard imvelo kunye "nehlabathi langaphandle." Iimzekelo zendlela yokungena / izibophelelo ziquka i-HTTP, SOAP, iSQL, i-REST, ikwazisa (i-JMS), i-imeyile, kwaye yiyo kuphela intonga ye-iceberg. Ezi zihloko zilandelayo ziquka ukusetyenziswa kweeValidators kunye noTshintsho ukuze zenzele umxholo womyalezo njengoko ziqhuba ngolu hlobo, kunye neendlela zokuvavanya / iindlela zokujongana neengxaki. Ukhuseleko lufakwe kwinqanaba elithile lekhosi.
Ukubonisa indlela yokwenza, ukuhlaziywa, ukuvavanya, nokuthumela izakhiwo zokudibanisa (EIP) ezisekelwe kwi-Apache Camel.
Ukuphuhliswa kweekamela nge-Red Hat® i-JBoss® Fuse (JB421) yinkxaso yesandla, i-lab-based based that gives Java designers and planners the comprehension of Apache Camel kunye neenkqubo zokuphucula kunye nezixhobo ze-Red Hat zinikeza inkxaso ngenkqubela phambili yeCamel.
Inkqubela phambili yekamela ihlelwe ngeenxa zonke:
Iikhosi ezibonisa ukuba iqela okanye ukusabalalisa ukusingatha ngokusebenzisa ubuncinci abaprofeti kunye namaxesha okugqibela
Iiprosesa ezibuyisela emuva, zichaza, zitshintshe imiyalezo ngaphakathi kwe-Camel stream.
Amacandelo anokuxhobisa ukwenza iipoppointshini ezisebenzisana nehlabathi langaphandle ukufumana nokuthumela imiyalezo.
Bonisa indlela yokujoyina inkqubo yokusebenza kwenkqubo yezoshishino.
Izicelo zoKwenziwa kweeNkqubo zoLwandle kunye neRed Hat® JBoss® BPM Suite (JB427) kukuba iinjineli kunye nabacebisi abanqwenela ukuqinisa inkqubo yokusebenza kwenkqubo yezoshishino.
Ukusebenzisa ngezandla kwiilabhu, ukuxhaswa kwamatyala kuya kuthatha ubunjineli kunye nezixhobo ze-Red Hat JBoss BPM Suite, ibhondi ebalulekileyo ebalulekileyo kunye ne-propelled display (BPMN 2.0), kunye nokuxolelana kwenkqubo yomsebenzi kwi-Java ™ SE kunye ne-Java EE. Nangona ukwenza izicelo zenkqubo yokusebenza, uvavanyo luya kuhlola indlela yokuhlola iimpawu kunye nokuphanda ezo zicelo zisebenzisa i-Red Hat JBoss Developer Studio. Iziganeko ziya kufumana indlela yokuthumela inkqubo yezoshishino kunye neskrini sayo sokusebenza.
Ukuthunyelwa kweeNkonzo zeBhasi kunye ne-Red Hat i-JBoss Fuse Attendees kuya kuthatha iikhono ezifunekayo ukujongana, ukuthumela, nokubuyisela kwakhona i-Red Hat JBoss Fuse kunye nokwakhiwa kweengcamango zesicelo esisekelwe kwi-OSGi esebenzisa i-Red Hat JBoss iFuse components, eziquka: i-Bundle administration Server ngamela ... Jonga
Qalisa, uhlele, ubeke iliso, uthumele izicelo ze-OSGi
I-Operation Bus (ESB) Ukuthunyelwa nge-Red Hat® i-JBoss® Fuse yinkqubo yezandla ezinika abaCwangcisi beeNkqubo kunye neeJava ™ ukuqonda ukuhamba kwe-Red Hat JBoss Fuse, ukujikelezwa kwe-Apache ServiceMix.
Abathathi-nxaxheba baya kuthatha iikhono ezifunekayo zokujongana, ukuthumela, nokubuyisela kwakhona i-Red Hat JBoss Fuse kunye nokwakha iimbono zeziko le-OSGi esekelwe kwisicelo esisebenzisa i-Red Hat JBoss Fuse's elements, eziquka:
Umbutho ngeFuse Fabric, i-Hawt.io kunye ne-Red Hat JBoss Developer Studio
Thatha ukukhawuleza ekujongeni i-JBoss Fuse, i-JBoss AM-Q kunye ne-Apache Camel
I-Red Hat® I-JBoss® Fuse Rapid Track (i-JB439) yikhosi ye-5 ye-Java eyenza abaphuhlisi be-Java ™, iimodeli kunye ne-Red Hat JBoss Fuse i-Firm chairmen ukuqonda kwe-Red Hat JBoss Fuse, i-Red Hat JBoss A-MQ. ), kunye neApache Camel.
Thatha kwiimpawu ozimele uyenze kwaye wenze i-engagement yoyilo (EIP) ekusebenziseni iCamel, kwaye uqonde indlela yokuhambisa ii-EIP kwi-Red Hat JBoss Fuse-inzuzo yokufumana inzuzo (ESB) ngokusekelwe kwi-Apache ServiceMix. Ukongezelela, qaphela indlela yokusebenzisa i-Red Hat JBoss A-MQ-iqonga lokuzisa ngokubhekiselele kwi-Apache Camel.
Bonisa umfanekiso wokubonisa imithombo yolwazi kunye nezinto ezibonakalayo, umzekelo, iitheyibhile, imbono kunye neenkqubo.
Uphuhliso lwe-Red Hat® I-JBoss® Iinkcukacha zoPhuhliso lweNtetho lubonisa iinjineli zolwazi kunye nabaveleli ngendlela yokwenza imithombo yolwazi kunye nezinto ezibonakalayo, umzekelo, iithebula, imbono kunye nezicwangciso. Ukusebenzisa ngezandla kwiilabhu, iziganeko ziya kufumana indlela yokuthumela ezi zinto ezibonakalayo kwi-JDBC kunye nokusetyenziswa kwezibonelelo zewebhu. Le khosi inokunceda ngokunjalo ukukhuphisana kwabakwi-accreditation in planning yabo yeSatifikethi se-Red Hat soLwazi kwi-Data Virtualization Exam (EX450).
Bonisa indlela yokuzisa umthamo wolwazi, ukwakha isistim esisekelwe kwisigxina, i-bunch kunye ne-store ekhuselekileyo, kwaye isibhakabhaka ngumda ukusuka apho.
I-Red Hat® JBoss® Data Grid Development (JB453) igxininise kwilungiselelo lokugcina nokulawulwa kwamacandelo esitolo. Iziganeko ziya kufumana indlela yokufikelela kwiivenkile kwiilayibrari nakwiimodeli ezikude (ezihlanganisiweyo nezingezantsi). Kwakhona, i-understudies izakufumana indlela yokukhusela izikhokelo zenkcazelo, ukudibanisa iibhawuni zeenkcukacha ze-matrix, nokuzingela inethiwekhi yolwazi.
Ukubonisa indlela yokudala nokuvavanya imigaqo usebenzisa i-UI yezobuGcisa kwiBusiness Central.
Imithetho yokubhala nge-Red Hat® i-JBoss® i-BRMS (JB461) iyayiqonda into engaphiliyo nge-Red Hat JBoss i-BRMS ilawula imoto kunye nenqwelo. Kule khosi, iziganeko zibonisa indlela yokudala nokuvavanya imigaqo esebenzayo kwi-UI yezobuGcisa kwiCentral Central.
Le khosi incike kwi-Red Hat JBoss i-BRMS 6.
Umxube weMithetho Yombhalo (JB461) kunye noPhuhliso lweeNkqubo zezicelo kunye ne-Red Hat JBoss BRMS (JB463).
Ukuqwalasela nge-Red Hat® i-JBoss® i-BRMS idibanisa umxholo kwimimiselo emibili yokubhaliweyo nge-Red Hat JBoss BRMS (JB461) kunye ne-Develop Hat Rules Applications kunye ne-Red Hat JBoss BRMS (JB463). Ibonisa abahloli bezebhizinisi, ukulawula abaqulunqi, kunye neenjineli ze-Java ™ zenkqubo yokusebenza, ukuvavanya, ukuphanda, nokulawula imithetho yezoshishino.
Iziganeko zinikezelwa ngongoma, kwizandla ezisebenzisayo i-Red Hat JBoss Developer Studio kunye ne-Red Hat JBoss i-BRMS enenjongo yokunika ithuba lokwenza nokongamela ibhizinisi lilawula imeko. Le khosi inokunceda ngokunjalo ukuba ulungele iSatifikethi se-Red Hat soLwazi kwiMithetho yoLawulo lweMigaqo yoLawulo (EX465).
Yakha iikhono lakho ngeendlela-ndlela ezidibanisa izicelo zangaphambili nakwi-back-office
Ukwakhiwa kwezicelo eziphambili ze-Red Hat Enterprise (JB501) sisiqendu se-Red Hat® JBoss® iikholeji. Ikhosi ixhomekeke kuhlalutyo lwengxelo. Kukho inkqubela ephakamileyo, i-hands-on course apho i-understudy idibanisa izicelo zangaphambili nakwi-back-office.
Ikhosi ixhomekeke kuhlalutyo lwengxelo. Izixhobo ezimbalwa zeRebat Middleware zisetyenziswe kwilungiselelo kubandakanya i-Red Hat JBoss Data Grid, i-Red Hat JBoss Enterprise Platform, i-Red Hat JBoss BPM Suite, i-Red Hat JBoss Fuse kunye ne-Red Hat JBoss A-MQ. Ukuxhaswa kwamagama kuya kusebenzisa i-Java ™ EE 6, i-AP yokuqhubeka ne-Java (i-JPA), ifom yezoshishino, imigaqo yezoshishino, izifundo zeekamela, ukugcina kunye nokulala ngaphakathi koxolelaniso. Ngokuvisisanayo, ngokutshintshisana kwezakhiwo ngokubhekiselele kulolu hlobo, njengokuba bebenzela ukulungiselela ilungiselelo lokugqibela. Iziganeko zixhomekeke ekubeni zibe nokufunda kwangaphambili kunye nezakhono eziphambili kwizinto ezisetyenzisiweyo.
Thumela ukulungelelaniswa, ukugcinwa kwezinto ezifikeleleke kakhulu kwizinto ezingekho kwi-rack nakwiimeko zefu.
Le khosi yesikhokelo esiphezulu kunye nabaphathi bekhono abanomnqweno wokuthumela ukulungelelaniswa, amandla okufikelela ngokugqithiseleyo kwizinto ezisemgangathweni nakwiimeko zefu.
Le khosi incike kwi-Red Hat Gluster Storage 3.
Iziganeko ziya kufumana indlela yokwazisa, ukulungiselela, nokugcina iqela lee-Red Hat Storage servers. Le khosi iya kuphanda i-Framework Records (CIFS) kunye nezikhokelo zoxwebhu lwenkqubo (NFS) ezisetyenziselwa iCustered DataBase (CTDB), kunye ne-repository stocking, kunye ne-geo-replication. Ekugqibeleni, iziganeko ziya kufunyanwa malunga ne module Hadoop ye-Red Hat Storage, ukujonga kuqala, kunye ne-geo-replication.
Le khosi inokukunceda ukuba ulungele iSatifikethi seSatifikethi se-Red Hat kwi-Hybrid Storage Storage Exam (EX236).
Jonga indlela yokuhambisa, ukujongana, nokulungelelanisa amandla kunye ne-OpenStack.
Inkqubo ye-Red Hat i-OpenStack Administration III (CL310) inikezela ngezandla ezibanzi ukulungiselela ababonisi-sikhokelo abanamava ekusebenziseni iindlela ezigcinwe ngokugcinwa kwe-Red Hat® Ceph Storage kunye neendlela zokulawula iinkqubo ze-OpenStack® Neutron. Iziganeko ziya kubeka imeko yeCeph kunye nokuyila kwayo njengemva yokugqibela ye-OpenStack, kwaye ilungiselele kwaye isebenzise izinto ezixhasiweyo ze-OpenStack Neutron.
Le khosi incike kwi-Red Hat OpenStack Platform 6.
Iziganeko ziza kuseka i-Ceph domain kunye nelungiselelo layo njengomva wokugqibela we-OpenStack, kunye nokuyila kwaye isebenzise iinqununu ezivaliweyo ze-OpenStack Neutron.
Isikhokelo soBungqina be-Red Hat